Kedu ka m ga - esi budata MSVCR120 DLL? - Microsoft
Isi > Microsoft > Msvcr120.dll download Microsoft - otu esi ekpebi
Kedu ka m ga - esi budata MSVCR120 DLL?
Idozi 1:WụnyeiheMSVCR120. wdgfaịlụ
BudatanawụnyeiheWdg-files.com Onye ahịa.
PịaOjuju 120. ...
PịaWụnye(achọrọ ka ị debanye aha mmemme ahụ tupu ị nwee ikewụnyefaịlụ - ị ga-kpaliri mgbe ị pịaWụnye).
1 Maachị 2021
Kedu ka m ga esi edozi MSVCR120 DLL na msvcr140 DLL na-efu efu?
Jiri obiọma nwalee usoro ndị a tụrụ aro n'okpuru.
Biko gbalịa ịwụnye PES 2021.
Wụnye mmelite Windows. Pịa Windows igodo + M ga-emeghe Ntọala. ...
** Biko gbalịa na-agba ọsọ SFC na DISM iji chọpụta maka usoro njehie na faịlụ rụrụ arụ. https: //support.microsoft.com/en-us/help/402652 ... ...
Debanye aha MSVCP140.wdgfaịlụ na aka.
Ọkt 5 2020
Ndewonu! N'isiokwu a anyị ga-ekwu maka Visual C ++, ebe ibudata ma wụnye ya, ma kpaa maka njehie na-eme mgbe kọmputa gị na-efu ụfọdụ ụdị ngwaahịa a. Microsoft Visual C ++ bụ otu ngwungwu ngwanrọ nke kọmputa gị ga-enwerịrị ọtụtụ egwuregwu yana ụfọdụ mmemme. O nwere ọba akwụkwọ nke na-enyere ngwa etinyere na Microsoft VisualC ++ gburugburu aka ịgba ọsọ.
Ajuju banyere ihe kpatara otu mmemme agaghị amalite ma ọ bụ wụnye, yana ihe ị ga-eme maka ya, ka a tụlere na otu n'ime isiokwu anyị gara aga, ị nwere ike ịchọta njikọ na nkọwa ahụ Ọtụtụ mgbe, sọftụwia ọgbara ọhụrụ nwere ike ibudata faịlụ dị mkpa n'oge nrụnye, mana ọ nwere ike njehie na ọrụ nke Microsoft Visual C ++ ngwugwu, kpatara pirated software nwụnye ma ọ bụ malware ọrụ. N'okwu a, ị kwesịrị ibudata Microsoft Visual C ++ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Nwere ike ibudata Microsoft Visual C ++ site na akụ ndị ọzọ, mana anaghị m adụ ọdụ ịkwụsị; anyị gosikwara otu esi ewepu nje na kọmputa na edemede anyị gara aga.
dị tweaking.com nchebe
Chọta njikọ nke otu n'ime ha na nkọwa ahụ. Iji wụnye Microsoft Visual C ++, ị ga-ekpebi ụdị ị chọrọ ma budata ngwugwu nkesa. N'okpuru Ugbu a, ụdị 2012 na 2015 bụ ndị kachasịkarị.
Agbanyeghị, buru n'uche na ngwa ọhụụ nwere ike ịrịọ maka ụdị emelitere n'oge adịghị anya. Ya mere, ka na-amalite. • Mepee ihe nchọgharị ahụ wee pịnye 'visual c ++ 2015' na igbe ọchụchọ (ma ọ bụ ụdị ọ bụla ịchọrọ ibudata. chọta ozi banyere ngwungwu ngwanrọ a, usoro ihe achọrọ na akwụkwọ ntuziaka • Site n'ụzọ, attentionaa ntị na usoro ihe achọrọ: Gbalia na ngwugwu ebudatara dakọtara na sistemụ arụmọrụ gị.
Biko mara na nsụgharị ndị mbụ nke Windows 7 na Windows XP MicrosoftVisual C ++ 2012 na n'elu. • Wee pịa Download. • Mgbe ahụ họrọ nbudata ị chọrọ na ct - ngwugwu maka usoro 32-bit ma ọ bụ 64-bit. • Osote.
Mgbe ebudatara ngwugwu ahụ, pịa faịlụ exe ugboro abụọ iji malite nrụnye. Wụnye Visual C ++ site na isoro ntuziaka na ọkachamara. Mgbe nwụnye zuru ezu, Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa na mgbanwe ndị ahụ na-arụ ọrụ.
Gaa na Mmemme & Akụkụ ma hụ na etinyela ngwugwu. Younwere ike ibudata ma wụnye ụdị ọ bụla nke Microsoft Visual C ++ Redistributable n'otu ụzọ ahụ. Nwere ike ịchọta njikọ iji budata nsụgharị niile nke Visual C ++ na nkọwa ahụ: Ọ bụrụ na ị mepee Mmemme na Akụkụ na kọmputa gị ị ga-ahụ ọtụtụ nsụgharị nke Microsoft Visual C ++ etinyeworị.
Emela ngwa ngwa ihichapụ ha. Ndị ọrụ na-ajụkarị, ma ha niile chọrọ nsụgharị nke Microsoft Visual C ++ ọba akwụkwọ na kọmpụta ha, ma ọ bụ ihe kpatara na a naghị emelite ụlọ akwụkwọ ahụ na nke kachasị ọhụrụ ma ewepụ ndị okenye. Azịza ya bụ na ị gaghị ehichapụ ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọghị nsogbu ihu nwere egwuregwu ma ọ bụ mmemme nke na-agaghị agba ọsọ mgbe ihichapụ ihe ochie nke Visual C ++, ọ bụrụ na ịnwere ọnọdụ dị otú a ndepụta nke mmemme arụnyere, ọ kachasị mma ịhapụ ndepụta a na-agbanweghi agbanwe.
Ọzọkwa, egbula ngwa ibudata nsụgharị 32-bit nke nchịkọta (yana х86 na aha ha), ọbụlagodi na ị na-agba ụdị 64-bit nke Windows (x64). jiri. A pụkwara iji nchịkọta dị otú ahụ site na mmemme na egwuregwu arụnyere na PC gị.
ngwa nbipute rapaara spooling
Ihe: Mgbe ịmalitere mmemme ma ọ bụ egwuregwu wee nweta ozi mperi ahụ 'Ihe omume ahụ enweghị ike ibido n'ihi na VCRUNTIME140.dll na-efu na kọmputa gị. Iji idozi nsogbu a, gbalịa ịtinye usoro ihe omume ahụ. ', Ọ pụtara na ụdị nke Microsoft na-efu na kọmputa gị.
A chọrọ Visual C ++ iji mee mmemme ma ọ bụ egwuregwu ịchọrọ ịmalite. Ihe ngwọta ya bụ ịwụnye ụdị Microsoft Visual C ++ achọrọ. Enwere njehie akọwapụtara maka ụdị ọ bụla: • VCRUNTIME140.dll na-efu efu - ịkwesịrị ịwụnye Microsoft Visual C ++ 2015; • MSVCR120.dll ma ọ bụ MSVCP120.dll na-efu - ịkwesịrị ịwụnye Microsoft Visual C ++ 2013; • MSVCR110.dll ma ọ bụ MSVCP110.dll na-efu - ịkwesịrị ịwụnye Microsoft Visual C ++ 2012; • MSVCR100.dll ma ọ bụ MSVCP100.dll na-efu - ịkwesịrị ịwụnye Microsoft Visual C ++ 2010; • MSVCR90.dll ma ọ bụ MSVCP90.dll na-efu - ịkwesịrị ịwụnye Microsoft Visual C ++ 2008; • MSVCR80.dll ma ọ bụ MSVCP80.dll na-efu - ịkwesịrị ịwụnye Microsoft Visual C ++ 2005.
Nke ahụ niile bụ maka ugbu a. Ọ bụrụ n’ịchọtara isiokwu a bara uru, biko pịa bọtịnụ ‘Dị ka’ dị n’okpuru ma denye aha na ọwa anyị ka ị hụkwuo. Daalụ maka ikiri.
Ebee ka m ga-ahụ MSVCR120 DLL?
Mmemme dị n'okpuru folda Mmemme (x86), dịka ọmụmaatụ, na-agba ọsọ na 32-bit, yabụ ị ga-eji yaMSVCR120.wdgfaịlụ site na SysWOW64. Mara: Ọ bụrụ na ị jiri ụdị 32-bit nke Windows 10, ị ga-eji yaMSVCR120.wdgfaịlụ site na folda System32.Mar 12 2021
Kedu otu ị si edozi njehie koodu ogbugbu enweghị ike ịga n'ihu n'ihi na ahụghị MSVCR120 DLL?
Nammezu koodu apughi inwe ike ihu n'ihi na msvcr120.ahụghị dll. Reinstalling nammemmenwere ikendozinke ansogbu. ... Gbalịa ịwụnyemmemmeọzọ na-eji ihe mbụ echichi media ma ọ bụ kpọtụrụ gị usoro nchịkwa ma ọ bụ software vender maka nkwado.
Gini ka msvcr120.dll ji eme ihe na Visual Studio?
Kedu ihe Msvcr120.dll ji? Faịlụ Msvcr120.dll, nke a makwaara dịka Microsoft R C Runtime Library, jikọtara ya na Microsoft® Visual Studio® 2013. Ọ bụ akụkụ dị mkpa, nke na-ahụ na mmemme Windows na-arụ ọrụ nke ọma. Ya mere, ọ bụrụ na faịlụ msvcr120.dll na-efu efu, ọ nwere ike imetụta ọrụ nke ngwanrọ metụtara.
skypehost.exe Microsoft skype
Ebee ka m ga-achọta msvcp120.dll na Windows 10?
msvcp120.dll bụ akụkụ nke Microsoft Visual C ++ na a na-achọkarị maka mmemme na-agba ọsọ mepụtara na Visual C ++. Gamesfọdụ egwuregwu ma ọ bụ ngwa nwere ike ịchọrọ faịlụ dị na folda egwuregwu / ngwa ntinye.
Kedu ihe kpatara ozi njehie msvcr120 na Windows 10?
Dịka ọmụmaatụ, a na-ehichapụ ma ọ bụ na-ezighi ezi ngwa na-ezighi ezi, msvcr120.dll, mebie ya site na ngwanrọ ọjọọ dị na PC gị ma ọ bụ ndekọ Windows mebiri emebi. Ozi njehie ndị a na-ahụkarị bụ: